काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले अबको १८ महिनाभित्र सिंहदरबारको प्रवलीकरणको काम सम्पन्न हुने बताएका छन् । उनले भने,‘सिंहदरबार अब भत्काउनु पर्दैन् । प्रवलीकरण गर्ने हो ।’
छिट्टै टेण्डर गरेर प्रवलीकरणको काम अघि वढछ,‘उनले भने,‘ ढिलोमा १८ महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ ।’ आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मानन्धरले सिंहदबार ६३ प्रतिशत जस्तोको त्यस्तै रहेको पनि जनाए । त्यस्तै उनले धरहरा पनि २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताए । उनले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाई नगरेको स्पष्ट पारे । मानन्धरले थपे,‘रानीपोखरीको पुनर्निर्माणपनि अब छिट्टै सुरु हुन्छ । खुरु–खुरु काम गर्न दिईएन् । विवादै विवाद सुल्झाउँदा केही समय लागेको हो । अब काम सुरु हुन्छ ।’
काष्ठमण्डपको पनि पुनर्निर्माण पनि चाँडै सुरु हुने उनले जनाए । मानन्धरले भने,‘स्थानीय जनताको सहकार्यमा हामी छिट्टै घोषणा गर्छौं । अब ढिलाई हुँदैन् ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले अहिलेसम्म ५ हजार स्कुल बनाईसकेको छ । उनले भने,‘अहिलेसम्म हामीले ४३ प्रतिशत निजी आवास बनाईसकेका छौं । जे भएको छ, त्यो भएको छ भनेर भनिदिनुपर्यो ।’ ७५१ मध्ये १२१ वटा सम्पदाहरुको पूननिर्माण भैसकेको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘हुन त रानीपोखरी र काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण किन भएन ? भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिन्छ, अब यी दुवैको पुनर्निर्माणले गति लिन्छ । रानीपोखरी अब पूरानै शैली र स्वरुपमा बनाउँछौं । अब केही दिनभित्रै काम सुरु हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएशनका कार्यकारी सदस्य ई. होमनाथ पोखरेलले राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको आज ३ वर्ष पूरा भएर ४ वर्ष लागेको बताउँदै अहिलेपनि निर्माणका कामहरु सुस्त गतिमा भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले त कामहरु द्रुत गतिमा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाईरहेका छौं । गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ भनेका छौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अहिलेपनि निर्वाह गरिरहेका छौं ।’
प्रकाशित १९ कार्त्तिक २0७५ , सोमवार | 2018-11-05 09:24:15